Sheekooyinka xiisaha leh ee ugu fiican
Dib -u -eegista sheekooyinka xiisaha leh
La Costa de las Piedras, oo ah sheeko tacabur ah oo ku taal Mallorca
Sheeko tacabur ah oo noogu timaada magaca Alejandro Bosch, laga yaabee in uu soo afjaro meeshaas sirta ah ee daadsan qorshaha. Sababtoo ah sheekadu waxay ka soo baxdaa qaybteeda magnetka ah ee tacabur kasta oo ku salaysan hal-abuur taariikhi ah. Waxaa loogu soo bandhigay munaasabadda isagoo leh midabyo qani ah oo leh…
3-da buug ee tacaburka ugu wanaagsan
Asalka suugaantu waxay ku salaysan yihiin nooca tacaburrada. Kuwa maanta loo aqoonsan yahay inay yihiin shuqullada ugu waaweyn ee suugaanta caalamiga ah ayaa innagu socdaalaya kun khatarood iyo daahfurnaan aan la tuhunsanayn. Laga soo bilaabo Ulysses ilaa Dante ama Don Quixote. Haddana maanta nooca tacaburka...
3 buug oo ugu fiican Clive Cussler
Haddii uu jiro qoraa quudhin leh oo weli ku haya hiddaha hal -abuurka ee iibiyaasha, waa Clive Cussler. Sida Jules Verne oo casri ah, qoraakani wuxuu nagu hoggaamiyay qorshayaal xiiso leh oo leh quudhin iyo qarsoodi sida laf -dhabarta. Runta …
3 buug ee ugu fiican Alberto Vázquez Figueroa
Aniga ahaan, Alberto Vázquez-Figueroa waxa uu ahaa mid ka mid ah qorayaasha ku-meel-gaadhka ah, macnaha in aan si fiican ugu akhriyey isaga oo ah qoraa weyn oo tacabur degdeg ah, markii aan weli aad u yaraa. Waxaan dhawaan ku soo noqday isaga oo aan uga mahadcelinayo buugiisa u dambeeyay ee Goodbye Mr Trump, kaas oo aan ku xaqiijiyay in…
Musiibada weyn ee jaalaha ah, waxaa qoray JJ Benítez
Qorayaal kooban oo adduunka ah ayaa qabta shaqada qorista meel sixir ah sida JJ Benítez sameeyo. Meel ay ku noolyihiin qoraa iyo akhristeyaal halkaas oo xaqiiqda iyo sheekooyinku wadaagaan qolal la heli karo oo leh furayaasha buug kasta oo cusub. Inta u dhaxaysa sixirka iyo suuqgeynta, inta u dhexeysa jahwareerka iyo ...
Luqadda qarsoon ee buugaagta, waxaa qoray Alfonso del Río
Waxaan xusuustaa Ruiz Zafón. Waxay igu dhacdaa mar kasta oo aan ogaado sheeko -tilmaameedka tilmaamaya dhinaca buugaagta, afafka qarsoon, udugga xikmadda ee lagu soo ururiyey khaanadaha aan dhammaadka lahayn, laga yaabee qabuuraha cusub ee buugaagta ... Waana wax wanaagsan inay sidaas ahaato. Mala -awaalka baaxadda leh ee qoraaga reer Catalan ...
Vozdevieja, waxaa qoray Elisa Victoria
Yaa xusuusan Elvira Lindo Manolito Gafotas? Ma aha in ay tahay arrin si baaskiil ahaan u noqonaysa mid moodada ku saabsan jilayaasha carruurta ee sheekooyinka dhammaan dhagaystayaasha. Waa su’aal in labadaba waqtigiisii ​​Elvira iyo Hadda Elisa, isaga oo u dhow ...
Meel fog, waxaa qoray Hernán Díaz
Had iyo jeer way wanaagsan tahay in lala kulmo qoraayo dhiiran, oo awood u leh inay qaadaan hawsha u sheegidda sheekooyin kala duwan, oo ka fog summadaha khaldan sida "qas" ama "hal -abuur". Hernán Díaz wuxuu ku soo bandhigayaa sheekadan sheeko cusub oo aan la dafiri karin qof wax qoro kaliya sababtoo ah, oo leh ujeedo xad -gudub ah oo ku jira maaddada iyo qaabka, sixir -ku -habeynta ...
Oliver Twist, oo uu qoray Charles Dickens
Charles Dickens waa mid ka mid ah qorayaasha ugu wanaagsan Ingiriiska ee abid. Waxay ahayd xilligii Fiktooriya (1837 - 1901), waqtigii uu Dickens noolaa oo qoray, in sheekadu noqotay nooca suugaanta ee ugu weyn. Dickens wuxuu ahaa macallinkii ugu muhiimsanaa ee dhaleeceynta bulshada, ...